SXAE-320 အရည်အသွေးကောင်းချုပ်အပြည့်အဝအလို-sxaequipment-Gofair Chinese China Manufacturer Supplier Factory
Burmese SXAE-320 အရည်အသွေးကောင်းချုပ်အပြည့်အဝအလို
ကုန်ပစ္စည်းအမည်: အပြည့်အဝအလိုအလျှောက် CNC3အရောင်များမျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်စက်တွေ
လျှောက်လွှာ: ဘက်စုံသုံး, rotary, multicolor, cylindrical ထုတ်ကုန်များအတွက်။
ပုလင်း, အိုး, ပလပ်စတစ်နှင့်ဖန်ပြွန်, ဦးထုပ်, ရော်ဘာပြွန်, အထပ်သား, နှုတ်ခမ်းနီစသည်တို့ကို
လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့အသငျ့ 1. :
Antistatic ဖုန်မှုန့် device ကို;
Flame ဟာ Pre-ကုသမှု;
optional လျှပ်စစ်ခရမ်းလွန်; စသည်တို့ကို LED ခရမ်းလွန်တင်နိုင်သည့်စနစ်သို့မဟုတ်ပူလေကြောင်းခြောက်သွေ့,
2. မထည့်ကွဲပြားခြားနားသောအပြောင်းအလဲနဲ့ပူ, စိုင်း, တံဆိပ်ကပ်ခြင်း, အပူလွှဲပြောင်းခြင်း, အရောင်တင်ဆီစသည်တို့ကို
3. အဓိကအစိတ်အပိုင်းများ၏အမှတ်တံဆိပ်ထိုင်ဝမ်, ပြင်သစ်, ဂျာမနီ, အမေရိကန်နှင့်ဂျပန်, ကောင်းသောအရည်အသွေး, လွယ်ကူသောစစ်ဆင်ရေး, တိကျမှန်ကန်မှတ်ပုံတင်အလွန်အလိုအလျောက်မြန်ဆန်ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်အနိမ့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဖြစ်ကြသည်။
အီးနှင့်အတူ 4. အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးစစ်ဆင်ရေး
ပုံနှိပ်မြန်နှုန်း: 2500-3600 ပိုငျးပိုငျး / နာရီ (ကွဲပြားခြားနားသောအသွင်သဏ္ဌာန်နှင့်ပုံနှိပ်ပုံရိပ်ကိုများအတွက်ချိန်ညှိ)
ပုံနှိပ်အရွယ်အစား: အချင်း 20-90mm, အမြင့် 25-220mm
Compressed လေထုဖိအား: 6-8 ဘား
စက်အတိုင်းအတာ: L ကို 2200 * W က 3000 * H ကို 2400mm
Power: AC အ 380V, 3-အဆင့်, 50Hz / 60Hz, 17Kw (သာမန်ခရမ်းလွန်), 5Kw (LED ခရမ်းလွန်)
မြင့်မားတဲ့စွမ်းရည်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်, ရှည်လျားသက်တမ်းကြာရှည်, သင့်သံသရာအချိန်တိုးမြှင့်, အလုပ်သမားစရိတ်များလျှော့ချဖို့, ထိရောက်သောကုန်ကျတိကျစွာပုံနှိပ်ပုံရိပ်နှင့်ဂရပ်ဖစ်, သုတေသနနှင့်အပြည့်အဝအလိုအလျောက်မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့် technology.simple စစ်ဆင်ရေးဖွံ့ဖြိုး, တိကျမှတ်ပုံတင်ရေး, Hopper တွေလည်း; ဓာတ်လှေကားတင်; , optional ကိုအမြင်အာရုံနဲ့ optical fiber ကိုမှတ်ပုံတင် optional ကို R u0026 D ကိုအပြည့်အဝအလိုအလျောက်မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ပစ္စည်းကိရိယာများအစာကျွေးပန်းကန်။
ဘေးကင်းလုံခြုံမှုလျှောတံခါးလုံခြုံရေးစနစ်, optional ကို system ကိုရေတွက်, အရည်အသွေးကောင်းထုံးစံလုပ်အပြည့်အဝအလိုအလျှောက် CNC သုံးအရောင်များကိုဆလင်ဒါထုတ်ကုန်စက်ရုံတရုတ်များအတွက်ပုံနှိပ်ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်နည်းပညာတက္ကသိုလ်မျက်နှာပြင်။